Sarudza zvakavanzika kana chengetedzo. Dambudziko renhema revabereki | Linux Vakapindwa muropa
Kurume kudaidzira matanho ekurwisa mhirizhonga nepfuti muzvikoro.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika Abraham Maslow, akaiswa kuchengetedzeka munzvimbo yechipiri mupiramidhi rake rekusimudzira kwevanhu. Yekutanga inogarwa nekugutsikana kwezvinodiwa zvine chekuita nekupona.
Munyika yakafanana neUnited States, uko nzanga Haugone kuwana mhinduro yekupfura munzvimbo dzedzidzo, makambani matatu akazvimirira akazviratidza izvo vachishandisa njere dzekunyepedzera uye kudzidza kwemuchina, vanoti vanokwanisa kudzivirira kurwiswa kwakadai. Mutengo wacho hauna kudhura kudaro. Ipa kambani izere ruzivo nezve chiitiko pane zvemagariro network uye email maakaundi zvigadzirwa zvemagetsi zvevana vadiki.
1 Vakoma vatatu vakuru
2 Kusarudza zvakavanzika kana chengetedzo Ndiani ati unofanirwa kusarudza?
Vakoma vatatu vakuru
Hunhu hwekushanda hwemakambani matatu; Bark Technologies, Gaggle.Net uye Securly Inc yakafanana. Kushandisa njere dzekunyepedzera uye kudzidza kwemuchina tarisa maemail, zvinyorwa, zvinyorwa uye chiitiko chezvemagariro. Chinangwa ndechekuti tsvaga zviratidzo zvekutanga zve cyberbullying, kutumira mameseji, kushandisa zvinodhaka uye doro, kana kushushikana. Uye zvakare, ivo vanotsvaga tsvaga vadzidzi vanogona kuunza njodzi yechisimba kwete kwavo chete, asiwo kune vavanodzidza navo kuchikoro. Chero kufanana ne Minority Report o Munhu wekufarira zvakangoitikawo netsaona.
Kana iwe ukawana mireza tsvuku nezve zvingangodaro matambudziko, inonyevera vatariri vechikoro, vabereki, uye mapurisa. Izvi zvinoenderana nekuomarara kwavo.
Mune bvunzo yekuchaira yakaitwa muzvikoro makumi manomwe neshanu nekambani Bark Technologies, yakawanikwa bhomba kutyisidzira uye kurwisa kwezvombo uye zvimwe (zvisina kutaurwa) matambudziko anotyisa
Kana dambudziko rikaonekwa, chinyorwa uye / kana yambiro yeemail inotumirwa kuvabereki uye zvikoro, uine matanho akakurudzirwa ekuti ungagadzirise sei. Shanduro yehunyanzvi yezvakaitika pandakanga ndiri mudiki. Vakadudzira vabereki vako uye vakakurudzira kuti vakuendese kuna chiremba wezvepfungwa, chiremba kana mudzidzisi wega. Sezvineiwo ivo vaigara vaine yakanaka kwazvo yekukurudzira iwe.
Hukura haibhadharise zvikoro zvebasa iri. Pundutso yako inouya kubva zvinobhadharwa nevabereki. Mari pamhuri ndeye $ 9 pamwedzi kana $ 99 pagore. Kune iyo mari ivo vanoongororwa anosvika makumi maviri neshanu enhau enhau kusanganisira Twitter, Facebook, Snapchat, uye Instagram.
Wedzera aya madhora mapfumbamwe pamwedzi ne 9 mamirioni evakomana (Zvishoma zvishoma nekuti kunyoreswa kuri pamhuri uye vazhinji vacho vanofanirwa kunge vari hama) iwe unowana pakati pe35000 uye 55000 yambiro pamwedzi. Vangani chaizvo serious? 16 mumwedzi gumi
Imwe yemakambani yakatsaurirwa kudzora vadzidzi ndeyeGaggle.Net. Ivo vanobhadharisa $ 6 pamudzidzi pagore. Iyo yakasimba inovimbisa dzakadzivirira kuzviuraya mazana mashanu nemakumi mashanu nenomwe gore rakapera uye mazana manomwe nemakumi manomwe nenomwe kubva muna Chikunguru wegore rino kusvika zvino. Kune rimwe divi vanoti dzakadzivirira mazana maviri nemakumi mana ekurwiswa nezvombo.
Sekutonga kwemanyepo enhema, kana huchenjeri hwekugadzira hwaona chinetso chingangodaro chinoendeswa kune nyanzvi yemunhu.
Kambani yechitatu, Sekuchengeteka, inobhadharisa madhora matatu pamudzidzi pagore kuitira sevhisi inonzi Filter, ine mawedzero ekuwedzera anokwanisa kuwedzera nezve $ 3 pamudzidzi pamutengo. Rimwe remapulagi aya rinobatanidza huchenjeri hwekunyepedzera pamwe nevaongorori vevanhu vakadzidziswa. Kubudirira kwayo kukuru? Tsvaga vadzidzi vachitsvaga nzira dzekuzviuraya paYouTube.
Kusarudza zvakavanzika kana chengetedzo Ndiani ati unofanirwa kusarudza?
Pepanhau reUSA Today, tinowana kupi nhau kubva, inomutsa nyaya yekuvanzika mune chikamu chechinyorwa, asi haibvunze chero munhu kunze kwekambani kana mutengi webasa. Ivo vanogona, semuenzaniso, kutora mazwi aBenjamin Franklin:
Avo vaizorega rusununguko rwakakosha, kuti vawane kuchengetedzeka kwechinguva, havana kukodzera rusununguko kana chengetedzo
Izvo zvavanoita kuziva kusakwana kweiyo system:
Hapana eemaitiro anoshandiswa akakwana. Panogona kunge paine manyepo ezvechokwadi uye pasina kutyisidzira chaiko kunoonekwa.
Chikoro iwe unogona chete kuongorora izvo zvishandiso zvaunazvo yakapihwa oe vadzidzil kushandiswa kwemaemail account anotungamirwa nesangano nemasevhisi ane hukama navo.
Vadzidzi kakawanda vanoziva zvakawanda nezve tekinoroji kupfuura vabereki vavo uye vanoziva pasocial network uye mameseji masevhisi avasingazombonzwa nezvawo kusvikira zvabuda musitaera.
Ikoko kunoratidzika kuve kusina humbowo hwekutie aya masevhisi anotendera kuti aone chimwe chinhu icho chakanaka chinhu nemhuri, vadzidzisi uye vamwe vanyanzvi mukubatana zvakananga nevechidiki haikwanise kuita. Zvichakadaro, yakawanda data iri kugadzirwa pane hunhu hwevechidiki izvo inogona kutengeswa kune mamwe makambani kana kubiwa. Fungidzira kuti urikukumbira basa, ramangwana rako mukuru anoverenga kuti wakaenda kuchikoro chakadai, ndokumbira iyo data uye wobva waona kuti waida kuzviuraya uine makore gumi nemana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Sarudza zvakavanzika kana chengetedzo. Dambudziko revabereki veAmerica
Kuedza kudzora muUSA kunoshamisa, pamwe dambudziko riripo mumhando yenzanga yavakagadzira maererano nekushanda kwemhuri, hunhu, nezvimwe.
Mashoko aFranklin akaita kuti ndifunge nezveGPL vs BSD. Ndinoisiya ipapo.
RISC-V ichachinja dzimbahwe rayo kubva kuUSA kuenda kuSwitzerland nekuda kwekutya kwekutengesa